Raadi & Raadi
Congratulations to Frank's bathroom cabinet product designer, Mr. Du rushed, for winning the excellent work award of the "AuTo design award" in 2019. After several months of multiple selections and comprehensive evaluation by a number of well-known local design tutors, ah "Shan Qiu" series stood out among the numerous entries…
Calaamadaha: Wall hung vanity unit, Wall mounted bathroom cabinet supplier
Calaamadaha: bixiyaha xalinta musqusha, musqusha qeybiyaha golaha wasiirada musqusha
Qof walba noloshiisa looma kala sooci karo qolka muraayadda musqusha ee leh saxanka, kaas oo noqda alaabta musqusha ee caadiga ah ee qurxinta guryaha casriga ah. Nolol tayo sare leh waxay u baahan tahay qurxin qurux badan si loo abuuro jawi guri diiran oo raaxo leh. FRANK, waxaad ka heli kartaa armaajooyinka alaabta musqusha ee aad jeceshahay. 2019 is a…
Markaad dooraneyso armaajooyinka musqusha, waxaan ka fiirsan doonaa dhibaatada qoyaan-cadeynta ee waxyaabaha faalsada ah ee musqulaha tayada badan. Due to a large amount of water used in the bathroom, deegaanku waa qoyaan badan yahay. So how is the 48-inch bathroom cabinets with sink moistureproof? Maanta, as a bathroom furniture manufacturer,…
Afarta talo si aad iskaga ilaaliso isbeddelka golaha muraayadda musqusha ee LED！
Calaamadaha: armaajo muraayad musqusha LED, Talooyinka dayactirka ee armaajooyinka faaruqa musqusha
Maalmahan, dadku waxay aad iyo aad uga taxadaraan tayada iyo qaabka muraayadda musqusha ee hogaanka ah. Tusaale ahaan, armaajooyinka alaabta guriga ee musqusha waa inaysan lahaan muuqaal wanaagsan oo qurxin ah, laakiin sidoo kale waxay kordhiyaan shaqada kaydinta musqusha. Si kastaba ha noqotee, there are many kinds of bathroom vanities…
Sida loo Iibsado Golaha Qubayska Musqusha ?
Calaamadaha: Armaajooyinka musqusha ee gaarka ah, Kabadhka musqusha ee gidaarka lagu rakibay
Kabadhka musqusha waa qayb ka mid ah qalabka lagama maarmaanka u ah alaabta guriga ee musqusha. Qolka musqusha oo qurux badan oo wax ku ool ah kaliya kama caawin karo dadka inay si wanaagsan u kaydiyaan alaabta laakiin sidoo kale waxay ciyaari kartaa saameyn qurxinta. Waqtigan xaadirka ah, suuqa waxaa ku yaal noocyo badan oo jikada musqulaha ah, with various styles…
Soosaaraha Shiinaha ee Iibka tooska ah iyo Nashqadeynta Golaha Wasiirada Musqusha!!
Calaamadaha: Bathroom Cabinet Supplier, Bathroom Mirror Cabinet
Golaha wasiirada musqusha ee tayada sare leh ee iibiyaha tooska ah iyo naqshadeynta cabirro kala duwan iyo qaababka golaha muraayadda musqulaha!! Alaabta musqusha waa shey muhiim u ah gurigeenna. Musqulaha musqulaha habboon ayaa qulquli doona musqushaheena. Qolka musqusha ee wanaagsan waxay nolosheenna ka dhigi karaan mid farxad leh. So it is very essential…
U habeeya Waxyaabaha Qubayska Musqusha ee Habab kala Duwan, Nadiifi Qolkaaga Musqusha!
Calaamadaha: Bathroom Cabinet, Bathroom Vanities
Customize bathroom vanities from China manufacturer in different styles and materials , qubeyskaaga qubee!!! Sidaan wada ognahay, Qolka muraayadda qolka musqusha waa shey muhiim u ah musqusha oo dhan. Muuqashada muraayadda musqusha oo wanaagsan ayaa ka dhigaysa musqusha oo dhan inay u egtahay mid quruxsan oo qurux badan. Add an extra instant glam to…
Sida loo doorto barkad wanaagsan oo lagu maydho, qolka musqusha iyo muraayadda musqusha
Waqtigan xaadirka ah, musqulaha badankood ee guryaha waxay gaari karaan kala goyn iyo qoyaan iyo fududahay in la isticmaalo, laakiin sida loo hagaajiyo qiimaha musqusha ayaa walwal ku noqday milkiileyaasha guryaha badan. Waxaan u maleynayaa in isku darka khaanadaha musqusha, weelka wax lagu dhaqo, and bathroom mirrors in the bathroom is a good…
Shaxda Horudhaca Miiska Dharka MANTANA
Unugga Waxyaalaha ah ee MantANA waxaa lagu heli karaa ballac ahaan 800 mm, 1000 mm, 1200 mm iyo 1,500 mm. Waxay la timid mid ballaaran, si buuxda dib ula noqon karo, khaanadda xiritaanka jilicsan iyo albaabbada leh sariirka lagag dhaqi karo, iyo khaanad qarsoodiga ah oo qarsoon oo leh qolka meel lagu kaydiyo. The ceramic washbasin has no overflow.…
Ma yihiin Xaashiyaha Xaabada ku habboon ee musqusha?
Ma jirto wax dafiraysa in sanduuqyada alwaaxku ay u muuqdaan kuwo heer sare ah musqusha kasta, laakiin sida badeecadaha dabiiciga ah badankood, waxaa loo baahan yahay in la helo qayb korjoogteyn ah si loo hubiyo in kumbuyuutarradu u muuqdaan kuwo wanaagsan sida maalintii la rakibay. Xarunta FRANK, halkii laga siin lahaa alwaaxyo alwaax adag, we have four…
Imaatinka cusub ee weelka dharka lagu dhaqdo
Suxuun caado u ah labadaba waa mid caadi ah oo fudud oo deegaanka u horseedi doonta olole casri ah. Elegance of genuine Italian Carrara marble vanity with sink and brass feet is designed to bring our customer elegance and contemporary home. Select from several finishes to coordinate the mirror seamlessly with the washstands…
4 noocyada armaajooyinka musqusha oo hadda caan ah, maxaad ogtahay
Dhamaanteen waan ognahay inay jiraan dhowr nooc oo noocyada qurxinta musqusha. Dhab ahaan, Hababka armaajooyinka musqulaha musqulaha ayaa sidoo kale loo qeybin karaa dhowr nooc. Si loo gaaro saamaynta qurxinta ugu wanaagsan musqusha, doorashada qaabka golaha musqusha aad ayey muhiim u tahay. The style of the…
Waxaan rajeynayaa inaan kaa caawiyo inaad si fiican u fahanto golaha wasiirada musqusha alwaax adag
Habka loo kala soocayo gollaha adag ee beenta ah ee beenta ah： 1. Qaabka takoorka ee Olfure: Inta badan geedaha adag waxay leeyihiin udgoon dhiig leh, geedku wuxuu leeyahay ur ubax leh 'resin resin', qoryaha qaxwaha ah wuxuu leeyahay ur aan caadi aheyn, laakiin fiberboard iyo guddiga cufnaanta waxay yeelan doonaan ur ur xoog leh, gaar ahaan albaabka golaha ama gudaha. 2. Tactile…
Cabir intee le'eg ayaad dooran kartaa golaha wasiirada musqusha ee labada dabaq ah?
Waa immisa cabirka golaha musqusha musqulaha ah ee 'double double'? Sidoo kale waa in tixgelin la siiyaa marka la qurxinayo. Haddaba doorashada cabirka waxay la xiriirtaa arrimo badan. Xulashada dhabta ah, waa inaan sameynaa qorshe dhameystiran. Here we take a look at the items that must be paid attention…
Raadi. Raadi 4 Raadi.